FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA SPRINGERDOODLE DOG SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny alika Springerdoodle Dog sy sary
Alika Springer Spaniel / Poodle anglisy mifangaro anglisy
Ferris the Springerdoodle amin'ny 2 taona
Ny alika Springerdoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny English Springer Spaniel ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Springerdoodle Retriever
Mpanoratra International Canine Registry®= Springerdoodle
Reba ny sôkôla sy Springerdoodle fotsy amin'ny 2 taona
Reba ny sôkôla sy Springerdoodle fotsy nalaina tamin'ny faha-5 volana— 'Ny reniny dia mainty sy fotsy anglisy Springer Spaniel ary ny dadany dia Standard Poodle mainty. Manana palitao tsara tarehy sy malefaka ary wavy izy ireo ary mazàna mandatsaka kely noho ny sasany amin'ireo Doodles hafa. ' Sary natolotry ny Old Mcdoodle Farm ao Central FL
Reba ny sôkôla sy Springerdoodle fotsy aseho eto amin'ny 5 volana, sary natolotry ny Old Mcdoodle Farm
Reba ny sôkôla sy Springerdoodle fotsy amin'ny faha-7 herinandro. Sary natolotry ny Old Mcdoodle Farm
'Maggie the Mini Springerdoodle dia efa-bolana. Tena ambany sy tsy mandatsaka izy. '
Ity no Springerdoodle antsoina hoe Rudy. Nanafaka azy tamin'ny fialofana izahay. 1 1/2 taona izy ary ilay 'clown' an'ny fianakaviana. Manana hatsikana lehibe izy ary mampihomehy antsika foana. Izy dia mamy, sariaka (amin'ny olona sy ny biby rehetra), be fitiavana sy malemy fanahy. Manana toetra mahafinaritra izy. Izy dia matanjaka be ary mila mandeha isan'andro . Fantatry ny vehivavy ao amin'ny biraon'ny mpitsabo biby ary fanta-daza amin'ny fandefasana banky eo an-toerana izy. Ary koa, ny ankamaroan'ny olona eo amin'ny manodidina anay dia mahalala sy tia an'i Rudy! '
Ferris the Springerdoodle puppy at 10 herinandro - 'Ity i Ferris! Ny reniny dia an English Springer Spaniel ary ny dadany dia a Poodle mahazatra . Tokony ho 35-40 pounds eo ho eo izy rehefa lehibe. Ho hitantsika - ny reniny dia kely tamin'ny 16 sm ny haavony, izay kely ho an'ny karazany. '
Ferris ilay mainty misy alika kely Springerdoodle fotsy amin'ny 10 herinandro
'Zippy ity, Sproodle / Springerdoodle efa-bolana antsika. Ny rainy dia fotsy Poodle kely raha fotsy hoditra sy fotsy ny reniny English Springer Spaniel . Mipetraka any Wales, UK izahay, izay tian'i Zippy mihazakazaka eny amin'ny havoana manenjika vorona tsy tratrany mihintsy !! Alika tena manan-tsaina izy, izay nahatonga ny lafiny fiofanana rehetra ho tena mora. Fanitsiana trano saika teo noho eo, ary ny fankatoavany dia tsara raha jerena ny taonany. Sariaka be izy ary tia ankizy. Tonga mpianakavy malala be izy. '
Zippy ny sôkôla miaraka amin'ny Springerdoodle fotsy amin'ny 11 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Springerdoodle
Sary Springerdoodle 1
sary Amerikana bulldog alika kely
haben'ny poodle mahazatra
karazana alika manomboka amin'ny y
mpanjaka charles spaniel mainty sy fotsy